Caruur soomaali ah oo kamid noqday dadkii ku geeriyooday dabaqii gubtay ee London - Wargane News
Home Somali News Caruur soomaali ah oo kamid noqday dadkii ku geeriyooday dabaqii gubtay ee...
Ugu yaraan 30 qof ayaa ku geeriyooday dabkii ka kacay guriga dabaqa ah ee ku yaalay magaalada London, waxaana ilaa hada la la´yahay tobanaan qof oo kale oo gurigaas kunoolaa. Sida laga soo xigtay ilo ka agdhow booliska, waxaa laga cabsi qabaa in ku dhawaad 70 qof ay isku dar ku geeriyoodeen musiibadaas.
Sida ka muuqato sawirada iyo magacyada ay boolisku soo bandhigeen, waxaa dadka gurigaas ka geeriyooday kamid ah dhowr caruur soomaali ah oo kamid ahaa dadka gurigaas degenaa. Sidoo kale dadka ilaa hada aan la xaqiijin geeridooda, waxaa kamid ah dad soomaaliyeed oo gurigaas kunoolaa
Dowlada Ingiriiska, Maamulka magaalada London iyo dhamaan shacabweynaha U.K ayaa si weyn u garab istaagay dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay dabka ka kacay gurigaas.
Kooxda Barcelona Oo Farrin Muhiim Ah U Diratay Xidiga Antoine Griezmann